हेफर इन्टरनेशनल नेपालले नेपालका विभिन्न जिल्लाहरुमा गरिबी निवारणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । पाल्पा जिल्लामा पनि विगत २२ वर्षदेखी गरिबी निवारणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । झण्डै डेढ वर्ष अघी तानसेन नगरपालिकामा र गत वर्षदेखी जिल्लाका ८ स्थानीय तहहरुमा उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ । यसै संर्दभमा पाल्पापाटीका सम्पादक विष्णु घिमिरेले हेफर इन्टरनेशनल नेपालका कार्यक्रम प्रबन्धक अनन्त राज सिलवाल संग तानसेनमा संचालित कार्यक्रमहरु र यसको प्रभावकारिताका विषयमा गर्नुभएको कुराकानीका केही अंशहरु प्रस्तुत गरेका छौं ।
हेफर इन्टरनेशनल नेपालले पाल्पा जिल्लामा कसरी आफ्नो कार्यक्रमलाई अगाडी बढाएको छ ?
धन्यवाद, हेफर इन्टरनेशनलले नेपालमा काम गर्न सुरु गरेको झण्डै २४, २५ वर्ष भयो, पाल्पामा प्रवेश गरेको २२ वर्ष भयो । गरिबी निवारण गर्ने मुख्य उदेश्य हेफरको हो । विगत डेढ वर्ष अघीबाट तानसेन नगरपालिकामा स्थानीय सरकारसंगको साझेदारी कार्यक्रम सुरु गरेका थियौं । खासगरी यो कार्यक्रममा स्थानीय सरकारको ७५ प्रतिशत र हेफरको २५ प्रतिशतमा संचालित साझेदारी कार्यक्रम हो । स्थानीय साझेदार संस्था मार्फत कार्यक्रम गरिने भएकोले तानसेनमा संचालित कृषि तथा पशु उद्यमशिलता विकास कार्यक्रमको साझेदार संस्था ग्रामिण आर्थिक विकास संघ रेडा हो । हाम्रो मुख्य उद्येश्य नै गरिबी निवारण हो ।
तानसेन नगरपालिकासंगको साझेदारीको डेढ वर्ष भएको छ, यो अवधीमा कस्ता कस्ता उपलब्धीहरु भएका छन् ?
हेफरले कृषि तथा पशुपालनमा काम गर्छ । यो आइएनजिओ भएकोले यहाँको स्थानीय साझेदार सस्था मार्फत हामी काम गछौं । तानसेनमा रेडा मार्फत काम गरेका छौं । हामीले पहिलो चरणमा तालिमहरु गरायौं । यो कार्यक्रममा हामीले उत्पादनलाई गुणात्मक फड्को मार्नेगरी काम गरेका छौं, प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै उन्नत नश्लको प्रयोग गरी कृषकलाई वढी फाइदा हुने गरी काम भएको छ । तानसेनमा विभिन्न पकेट कार्यक्रमहरु सुरु भएका छन् । उहाँहरुले वडा अनुसार विभिन्न पकेट क्षेत्रहरुमा कतै वाख्रा पकेट, कतै तरकारी पकेट त कतै अकवरे खुर्सानी, बंगुर लगायतका कृषि तथा पशुविकासका पकेट क्षेत्रहरु बनाएर काम गर्नुभएको छ । खोरहरु निर्माण गर्नुभएको छ । गोठ सुधारहरु भएका छन् दुग्ध उत्पादनमा वृद्धी भएको छ भने डेरी व्यवस्थापन भएको छ । हाम्रो १० हजार रुपैया अनुदान दिदा पनि राम्रा खोरहरु निर्माण भएका छन् । थोरै अनुदानले धेरै लगानी गर्नुभएको छ । १० वटा भन्दा बढी माउ बाख्रा पाल्नेहरु धेरै हुनुहुन्छ ।
युवाहरुलाई विना धितो ऋण प्रवाह र लगानी गर्ने भन्ने थियो यसको प्रभाव कस्तो रहेको छ ?
यो कार्यक्रम अन्र्तगत तानसेनमा युवा उद्यमशिलता विकास गर्न युवा उद्यमीहरुलाई वैंक संग जोडेर ऋण लगानी भएको छ । अहिलेसम्म सवा ७ करोड ऋण स्वीकृत भइसकेको छ भने ३ करोड बढी लगानी भइसकेको छ । विना धितो ऋण प्रवाह र लगानी गर्दा युवाहरु उद्यमी बनेका छन् । विना धितो ऋण प्रवाहले युवाहरुमा उद्यमशिलता गर्ने जोस र जाँगर पलाएको मैले देखेको छु । काम गर्ने, व्यवसाय गर्ने चाहना हुदा हुदै पनि लगानीको अभावमा बैदेशिक रोजगारीतिर पलायन हुनुपर्ने वाध्यतालाई घटाएको छ । अहिले त बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर यहाँ उद्यम गर्नेहरु अधिकांश छन् ।
तानसेनमा संचालित परियोजनाको मध्यान्ह भएको छ, अव परियोजना कसरी अगाडी बढ्छ ?
धन्यवाद, हामी यो परियोजनाको मध्यान्नमा छौं । यो अवधीमा तानसेन नगरपालिका संगको साझेदारी कार्यक्रम अत्यान्त प्रभावकारी भएको छ । यो हेफरको दृष्टीमा मात्र होइन, तानसेनवासीकै दृष्टीमा प्रभावकारी भएको छ । त्यसैले केही दिन अगाडीको तानसेन नगरसभाले कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि नगरसभाबाट २ करोड ७ लाख रुपैया पास गरेको छ । अहिलेसम्म हामी तानसेनका ग्रामिण क्षेत्र केन्द्रित थियौ भने अव हामी ग्रामिण क्षेत्रबाट नगरबस्तीहरुमा थप कार्य गर्दैछौं । जस्तै मासु पसल, दुध डेरीहरु सुधार तथा व्यवस्थापनका कार्यहरु गर्दैछौं । आगामी २ वर्षका लागि थप गर्ने निर्णय भएको छ ।
हेफरले उत्पादन संगै वजारीकरणमा पनि ध्यान दिन्छ भन्छन् नी तानसेनको उत्पादनको वजारीकरणका लागि के गर्नुभएको छ ?
हो, पक्कै पनि हामी उत्पादन मात्रै गर्दैनौं कृषकका उत्पादित उपजहरु वजारीकरणमा पनि सहयोग गछौं । उत्पादन बृद्धी गर्ने र अव हामी वजारीकरण कसरी गर्ने भन्नेमा केन्द्रित छौं । कृषकहरुले उत्पादन गरेका खसी बोकाहरु जिउदै अन्दाजी बेच्नुपर्ने अवस्था थियो, हामीले काम गरेका ठाउहरुमा जिउदो खसी बोका तौलेर बेच्ने व्यवस्था गरेका छौं । खसीबोकाको शारिरीक परिक्षण गरेर विक्री सुरु भएको छ । यसले किसानले उचित मूल्य पाएका छन् । त्यहाका महिला सहकारीहरुले त्यसको व्यवस्थापन गरेका छन् । व्यवस्थापन गर्दा प्रति केजीमा ४, ५ रुपैया सहकारीहरुले लिएर व्यवस्थापन गरेका छन् । पाल्पाका ३ वटा सहकारीहरुलाई हामीले गाडी व्यवस्था समेत गरेका छौं । तानसेन, रम्भा र निस्दीका ३ सहकारीलाई कृषि उपज वजारमा पुरयाउन ५० प्रतिशत अनुदानमा गाडी सहयोग गरेका छौं, यसले मार्केटिनमा सहयोग पुग्नेछ । हामीले दुग्ध पदार्थको उत्पादन र वजारीकरणमा पनि ध्यान दिएका छौं । डेरी सुधार कार्यक्रम, दुधको खपत बढाउने काम गरेका छौं । लैनो भैसीहरु किसानलाई उपलध गराउने काम गरेका छौं । हामीले तानसेनमा कृषि उपज वजारीकरणको लागि कृषि एम्बुलेन्स सुरु गरयौ, तानसेनमा २२ हजार किलो तरकारी विक्री भएको छ । भने यसैको सिको गरेर रम्भाले पनि कृषि एम्बुलेन्स सुरु गरयो त्यहा लिची राम्रो उत्पादन हुने भएकोले त्यहा लिचीको वजारीकरणमा सहयोग पुगेको छ ।
यसरी नै हाम्रा पयिोजनाहरु सुरु भएका पालिकाहरुमा हामी सहकारी मार्फत काम गछौं । सहकारीहरुले विभिन्न समन्वय गरेर काम गर्नुभएको छ । खासगरी तानसेन वजारमा थोक वजारको काम पनि अघि वढेको छ । तानसेन होलाङ्गदी भन्दा माथी करिव १ करोड लगानीको थोक वजार सुरु हदैछ । त्यहा किसान कार्ड लिएर जान्छन् र सस्तोमा कृषि उपज किन्न पाउछन् । यो थोक वजार आगामी वर्ष संचालनमा आउछ । त्यस्तै संकलन केन्द्रहरु निर्माण गर्ने र त्यहा संकलित कृषि उपजलाई वजारीकरण गर्दै आएका छौं । तानसेन लगायत पालिकाहरुको टोलहरुमा संकलन गरेर तानसेन, बुटवल लगायतका स्थानहरुमा विक्री हुदै आएको छ ।
कृषि र पशुपालन हामी सबैको पहिचान वनेको छ । पशुपालनका लागि घाँस नभइनहुने चिज हो, हामीले घाँसको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसस्थाहरु संग मिलेर घाँसका विउहरु वितरण गरेका छौं । आगामी १,२ वर्षमा पाल्पा घाँसको क्षेत्रमा पनि नमुना बन्ने सम्भावना छ ।
अन्त्यमा, कृषि र पशुपालनका क्षेत्रमा जिल्लामा कसरी परियोजना अगाडी बढेको छ ? परियोजना सुरु नभएका पालिकाहरुमा कहिलेदेखी सुरु हुन्छ ?
कृषि तथा पशुपालन लगायतका कार्यक्रमहरु गर्दै जादा अहिले सबै पालिकाहरुमा काम सुरु भएको छ । पाल्पाका ८ पािलकाहरुमा कार्यरत छौं । साझेदारी सस्थाहरु मार्फत । बगनासकाली र रैनादेवीमा आगामी वर्ष देखी सुरु गछौं । यो हेफर भन्दा नी स्थानीय तहको आफ्नै कार्यक्रम हो । यसमा कृषि र पशुविकास क्षेत्रमा हाम्रो प्राविधिक सहयोग हुन्छ । वैंकहरु संग जोडेर ऋण प्रवाहमा सहयोग गछौं, उत्पादित कृषि उपजलाई वजार संग जोड्न सहयोग गर्ने काम गरेका छौं । तानसेनबाट सुरु भएको परियोजना अहिले ३३ पालिकाहरुमा सुरु भएको छ । अरु १५ वटा जती स्थानीय तहहरुले साझेदारीको प्रस्ताव गर्नुभएको छ । स्थानीय तहहरुले यसलाई राम्रो रुपमा लिएका छन् ।
पाल्पामा ट्रिपर दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु